Ny Meksika na Mekisiko, afaka tenenina ihany koa hoe Firenena mivondron' i Meksika, dia firenena any amerika avaratra. Any avaratr' i Meksika dia misy ny Etazonia ary any antsimo misy an' i Beliza sy Goatemala. Miisa 107 tapitrisa ny ny olona miaiana any Meksika (20 tapitrisa any amin' ny tananan' i Mexico).
Tamin' ny taonjato faha enina ambin'ny folo, nampilefitra ny foko azteka ny espaniôla entin' i Hernán Cortés miaraka amin' ny foko rehetra izay fahavalon' ny Azteka noho ny hatsaran' ny fitaovam-piadiany ary ny habetsahany rehefa miady miaraka amin' ny tafika espaniôla.
Nanafika ny Espaniôla sy ny foko havany nonina manodidina ny tanànan' i Mexico ny Azteka, taorian' io dia nisy ringana mitondra ny anarana hoe Noche Triste tamin'ny 1520. Io ringana io sy ny aretina entin' ny Eorôpeana avy any Eorôpa no nampiongana ny fahefana azteka tamin' ny taona 1525.
Taorian' izay faharesena sy fandringanana ny foko azteka izay, nozanahan' ny Espaniôla i Amerika Afovoany. Ny anaran' ny zanatany espaniôla ao Amerika Afovoany dia Espaina-Vao. Ny sisintany avaratr' io Espaina Vao io dia tonga hatrany atsimon' i Etazonia (izany hoe eo amin' ny misy an' i California, I Arizona, I Meksika-Vao ary I Texas ankehitriny). Efa nitsangana ny tanàna meksikana lehibe (Mexico eo amin' ny toeran' i Tenochtitlán), Guadalajara, Pueble ary Monterrey.
Taorian' ny fanjanahantany espaniôla, tonga tao Espaina-Vao ny misionera espaniôla mba hampiova ny finoan' ireo tompontany. Anisan' ireo misionera ireo, miavaka i Bartolomé de las Casas amin' ny faniriany hiaro ny foko tompontany.
Nanomboka tamin' ny taona 1535, ny fandrindràna ny zana-tanin' i Espaina-Vao dia omena ny mpanjaka faharoa. Ny voalohany dia i Antonio de Mendoza, notendren' i Charles V
Nandritra io fe-potoana io, nihananankarena ny fanjakana espaniôla tamin' ny alàlan' ny fitsentserana ny harena an-kibon' ny tany toy ny volamena sy ny volafotsy) ary koa tamin' ny fambolena (fary ho an'ny siramamy, kafe) kanefa amin' ny lafiny isan' ny mponina, nihena dia nihena ny isan' ny mponina tompon-tany noho ireo asa an-terivozona sy ny aretina. Avinavina fa talohan' ny nahatongavan' ny Espaniôla, 25 tapitrisa ny isa-mponina tao afovoan' i Meksika. Iray tapitrisa sisa izy ireo tamin' ny taona 1650.
I Meksika dia firenena any Amerika Avaratra. Mizara sisintany amin' i Etazonia izy (3 326 km) any avaratra, amin' i Belizy (1 936 km) ary amin' i Goatemala (962 km) any atsimo. Ny velaran' i Meksika dia misy 1 972 550 km² raha isaina ao ny nosy an' i Meksika any ampovoan-dranomasina. Mitotaly 2,7 tapitrisa km2 ny velaran' ny ZEE an' i Meksika. Manana ny nosy Guadalupe sy nosy Revillagigedo (amin' ny Ranomasimbe Pasifika) i Meksika. Misy afotroa maromaro ihany koa any Meksika. Ny tendron' i Orizaba dia manana haambo 5 700 m. Kanefa 10 m monja ny haambon' i Laguna Salada. Misy horohorontany matetika ny any Meksika.
Amin' ny harena an-kibon' ny tany, misy volafotsy, varahina, etona viajanahary, volamena, solitany, firamainty ary fanitso ny any Meksika
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Meksika&oldid=1041149"
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 11:29 ity pejy ity.